Somaliland oo karan-tiil gelisay shaqsiyaad lagu tuhmayo Coronavirus
Dr Maxamed Cabdi Xergeeye, agaasimaha guud ee Wasaaradda Caafimaadka Somaliland.
HARGEYSA, Somaliland – In ka badan toban qof oo lagu tuhmayo Coronavirus ayaa laga qabtay madaarka diyaaradaha Hargeysa, sidda ay warbaahinta kasoo xigatay mas'uul ka tirsan Wasaarada Caafimaadka Somaliland.
Dr Maxamed Cabdi Xergeeye, agaasimaha guud ee Wasaaradda, ayaa sheegay in dadka ay baarayaan ay tiradoodu tahay 16 illaa iyo 17 ruux.
Sidda uu ka dhawaajiyey Xergeeye, oo xubin ka ah Guddiga ka hortagga caabuqaas, ma jiro qof wali la hubo in uu la nool yahay cudurka.
Dhamaan shaqsiyaadkaas, sidda ay wararku qeexayaan, ayaa shalay lagu hakiyey garoonka diyaaradaha Cigaal ee magaalada Hargeysa.
Isagoo hadalkiisa sii wata, Mr Xergeeye ayaa daboolka ka qaadey in dadkaas ay geyn doonan goob ay u diyaariyeen lagu karan-tiilo bukaanada.
"Sidda caadada waxay halkaas ku jiri doonan muddo 14 maalmood ah oo baaritaan ah, hadii aysan kasoo bixin astaamaha fayruska waa la fasaxi doonaa," ayuu lagu waramay in uu yiri Dr Maxamed Cabdi Xergeeye.
Dedaalada ka hortagga caabuqaas ayuu caddeeyay in ay sii laba-jibaari doonan, isagoo rajeeyay in cudurka uusan soo gaarin Somaliland.
Balse wuxuu ka gaabsaday in uu carabaabo wadamada ay ka yimaadeen, inkastoo ay jiraan macluumaadyo la xiriirinaya dalal uu kamid yahay Mareykanka, kaasoo si ba'an uu u saameeyay cudurkaas dilaaga ah.
Guud ahaan Soomaaliya, illaa iyo haatan waxaa laga xaqiijiyey hal kiis oo COVID-19 ah. Muwaadin ka yimid dalweynaha Shiinaha ayaa laga helay kaasoo haatan ay xaaladiisa la tacaaleyso Wasaaradda Caafimaadka Federaalka.
Somaliland oo shaacisay kiisas horleh oo ah safmarka Coronavirus
Somaliland 10.05.2020. 10:10
Sidoo kale, qofkii shanaad ayaa degaanada maamulka gooni u goosadka ah ugu dhintay xanuunka.
Somaliland oo shaacisay kiisas cusub iyo qof u dhintay Coronavirus
Somaliland 06.05.2020. 12:00
Kiisaska fayruska dilaaga ah ee Corona ee Somaliland oo gaarey lix
Somaliland 19.04.2020. 12:13
Coronavirus: DF oo warar is-burinaya kasoo saartay kiisaska Somaliland
Soomaliya 01.04.2020. 15:35